Akụkọ - Mba iri abụọ na mbụ (Guangzhou) Mmekọahụ Mmekọahụ, Ngwaahịa Ndị okenye, na Ngwaahịa Ngwaahịa Ahụ malitere na November 1st!
On November 1, nke iri abụọ na otu National (Guangzhou) mmekọahụ Culture, Adult Products, na Health Products Expo e grandly meghere na Pazhou Nanfeng International Convention na ngosi Center. Oge ngosi bụ November 1-3. A na-eme nnọkọ a n'okpuru ezi ọnọdụ nke na-eme ahụike mba, isiokwu ya bụ "ndị ọgbọ ahụike na ọdịmma mmekọahụ".
N'iji ya tụnyere ihe ngosi gara aga, ihe ngosi nke afọ a agbasawanye ebe ya, gbasaa nhazi ya, nwee isi ihe ọhụụ, ma na-adọrọ adọrọ. Lọ mgbakọ a nwere mpaghara nke square mita 20,000, na ebe mgbakọ alaka ya bụ 3,000 square mita nke ahịa ngwaahịa ngwaahịa Guangdong. Ọ na-elekwasị anya na ihe ọhụrụ na iche iche na nhazi ọrụ na nhazi mpaghara ngosi. Vellọ ntu pụrụ iche pụrụ iche, imepụta ọkụ mara mma, na usoro ọhụụ ọhụụ ọhụụ ahụrụ ọhụụ ga-eme ka ndị na-ege ntị nwee ume.
Post oge: Apr-15-2020
Silibọn ndị ji ya arụ ọrụ, Clitoral Vibrator, oke oyibo, Sexmụ nwanyị Sexmụaka Sexmụaka, G-Abụọ Vibrators, Ultmụaka Mmekọahụ nke Ndị okenye,